Beddelaan Mpg in wmv ugu dhaqsiyaha badan ku Mac / Win (hab xor ah ka mid ah)
Sida loo Beddelaan Mpg in wmv (Windows Media Video) ee Windows 8
" Sidee ayaan u badalo files ee Mpg in wmv? Mar kasta oo aan geliyaan .mpg video files galay gaare Movie, oo waxay kor u tuso faylasha sida audio. Qof talinayaa waxaan iyaga loogu badalo in ay .wmv files, laakiin aniga ma IDEA sida loo tago oo ku saabsan in ! I CAAWI!." Sidoo kale helay nooc oo kale ah dhibaatooyinka? Dhab ahaantii waa ay fududahay si ay u xaliyaan. Dhammaan waxa aad u baahan tahay oo keliya Mpg xirfadle in Converter wmv.
Qeybta 1: Hel Mpg ee Best & Professional in WMVConverter
Qeybta 2: Mpg Free in Converter wmv
Qeybta 3: Mpg Online in Converter wmv
Taageerada Qaabka Broad - Taageero ballaaran oo kala duwan iyo wixii soo baxayey qaabab video ay ka mid yihiin wmv, AVI, MKV, MOV, MP4, FLV, iwm
Presets badan: Waxaad si toos ah u dhigay karaa qaabab wax soo saarka sida iPhone, iPad, telefoonada Android, Console ciyaarta, iwm
Hillaaca Speed ​​Conversion: Waxaa ka shaqeeya 30X xawaaraha ugu dhaqsaha badan, si ka dhaqso badan wax kasta oo kula tartamaya.
Tayada Sare: Waa badasha videos aan laga badinin video tayada asalka ah.
Features kale: Waxaa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa videos, download videos (YouTube ka mid ah), iyo in ay DVD gubi video ee tayo sare leh.
Halkan waxa aad soo bandhigay Mpg in wmv Windows diinta talaabo talaabo ah. Haddii aad ku saabsan si loogu badalo Mpg in wmv ee Mac socda Mac OS X Snow Leopard, Libaaxa iwm yihiin, waxaad tagi kartaa ka Guide User of Video Converter u Mac .
Sida loo badalo YouTube video Iyadoo Wondershare Video Converter
1. Ku dar files Mpg in Mpg in ay Converter wmv
Si aad ku dari files, waxaad si toos ah jiidi kartaa video ka fayl file aad liiska suuqa kala qalliinka; ama guji "Add Files" badhanka si ay u doortaan Mpg ku soo gudbin aad rabto in aad si loogu badalo. Diinta Dufcaddii waxaa lagu taageeray.
2. qaab saarka Set sida wmv
Riix ah "Qaabka Output" button image dhinaca midigta, taas oo horseedaysa ah "Qaabka Output" window. Ka "qaab"> "Video" sida qaab wax soo saarka aad Dooro wmv. Haddii aad u doonayaa inaan badalo Mpg in wmv ciyaarta faylasha wmv on BlackBerry ama qalabka kale wmv taageeray, waxaad dooran kartaa goob defaulted u qalabka ay bixiyaan Converter ah.
3. Ku bilow si loogu badalo Mpg in wmv
Riix badhanka "Beddelaan" inuu ku soo bilowdo qaab beddelidda. Marka ay dhammaato, riix batoonka "Open Folder" "si aad u ogaato meesha aad badbaadin files wax soo saarka.
Haddii aadan rabin in la badalo video oo dhan, ka hor inta qaab beddelidda, riix "Edit" button image, markaas waxaad isticmaali kartaa "jar" shaqeeyaan ka heli qayb ka tihiin kuwo dooni. Tani Mpg in wmv Converter siisaa hawlaha tafatirka awood badan, oo ay ku jiraan ku daray watermark, Cinwaan, iwm Waxaad tegi kartaa Guide User of Video Converter wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hawlaha edit ah.
Qeybta 2: Mpg Free in wmv Converter &
# 1. Mpg Free in wmv Converter: Wondershare Video Converter Free
Tani Mpg si xor ah u Converter wmv aan u bedeli karaan oo keliya videos laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad kor video ay video function tafatirka awood badan sida falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray saamaynta, iyo in ka badan. Marka laga reebo in, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa online videos xawaare si degdeg ah u leh.
Haddii aad raadinayso ah 100% Mpg FREE in Converter wmv. waxa ay noqon doontaa doorashada ugu fiican ee aad. Waxay ku siinaysaa video ah la gediyay aan watermark. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad si gaar ah oo ku saabsan tayada video wax soo saarka iyo xawaaraha qaab beddelidda, waxaad u baahan doontaa si aad u hesho Video Converter Ultimate.
Sida loo Beddelaan AVI in FLV ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Orbit Downloader u Mac Alternative: 1-Click to Download Web Videos ee Mac
Sida loo Beddelaan MP4 in VOB
Sida loo Play kasta Video on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan Mpg in wmv (Windows Media Video) ee Windows 8